Xog: Xukuumadda Khayre Oo Ku Dhacday Shirqool Siyaasadeed. Akhriso Shaxda Loo Dagay. – Hornafrik Media Network
Kadib markii Xukuumadda Kheyre noqotay mid ka duwan xukuumadihii hore oo inta badan aan lahaan jirin Awood Fulineed, Isla markaana uu Raisul Wasaare Kheyre ku guuleystay in golihiisa wasiiradda uu si dhab ah u maamulo ayaa waxaa soo baxaya in Madaxwaynaha iyo Saaxiibadiisii Guusha oo uu ugu horeeyo Fahad Yaasiin inay raadinayaan Xeelad ay ku soo ceshadaan Awooddii Dalka ee gacantooda laga bixiyay.
Kooxda soo dhisatay Farmaajo waxay dajisteen Qorshayaashan
1- Fahad Yasin oo ahaa ninkii sababta u ahaa in Xasan Khayre laga dhigo Raiisul Wasaare ayaa loo idmay inuu la maamulo Howlaha Xukuumadda Khayre,
2- Agaasimaha Madaxtooyadda uu si dadban uga shaqeeyo, uguna jiheeyo Xukuumadda siyaasad qar iska tuurnimo ah, si loo sumcad dillo Xukuumadda Khayre, looga horkeeno Shacabka iyo Xildhibaanadda, kadibna si fudud meesha looga saaro.
Madaxtooyadda ayaa dooneysa in la keeno Raisul Wasaare cusub oo aan miisaan laheyn oo dhamaan golaha wasiiradda loo qoro, Si Awoodda Dalka ay ugu soo laabato Gacanta Madaxtooyo.
Sidii loogu magacaabay Fahad Yasin Agaasimaha Madaxtooyadda waxaa dhacay laba arin oo kala ah:-
1- Dhiibiddii Qalbidhagax.
2- Qorshaha Madaxweynayaasha dawlad goboleedyadda lagu bedelayo.
Labaddaan Qorshe oo Agaasimaha Madaxtooyadda Fahad Yasin lug weyn ku lahaa ama uu ka shaqeeyey waxay xukuumadda Raisul Wasaare Kheyre u keentay ama sababi doontaa arimahan soo socda.
1- Dhiibista Qalbi dhagax oo Xukuumadda Masuuliyad wadareed ku sheegatay, Madaxtooyadana ka aamustay waxay u keentay in taageerada shacabka in badan lumiso, Baarlamaanka Soomaaliyana qeyb badan ka hor timaado,
2- Qorshaha Lagu doonayo in dhamaan Madaxda Dawlad goboleedyadda lagu bedelo ayaa lagu doonayaa in xukuumadda looga horkeeno Dawlad goboleedyadda iyo beesha Caalamka, arintaas oo aakhirka keeni doonta in Xukuumadda Khayre ay wayso Kalsoonidda Baarlamaanka Somalia.
Kooxda Madaxtooyadda ee uu hogaamiyo Fahad Yasin waxay ku guuleysteen Xukuumadda Kheyre in ay dhexda ka joojiyaan duufaan siyaasadeed u mideysay dhamaan Madaxda Dawlad Goboleedyadda Somalia, madaxdaas oo ah kuwii ka badbaadiyey Xukuumadda Kheyre kiiskii Dhiibista Qalbi Dhagax,
Duufaantaan oo haddii uusan Raisul Wasaare Kheyre fahmin oo uusan iska badbaadin ku keeni doonta Xukuumadda Kheyre in Kalsoonida beesha Caalamka iyo mida Baarlamaanka Somalia weyso, sidaana meesha looga saaro.
Qalalaasaha Cusub ee lagu hogaamiyay Xukuumadda Khayre oo ah mid aysan ka bixi karin , sababna looga dhigay inay Hogaamiyayaasha Dowlad Goboleedyadda faragaliyeen Siyaasadda Dibadda ee Dalka ayaan xalkeedu ahayn sida hadda loo maamulayo ee ah Isbadal aan Sharci ahayn oo laga hirgalinayo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Dhexe (Regime Change). Waxaana Istaraatiijiyadan loo jeexay Xukuumaddu inay ku socoto ay keenaysaa waqti dhow in Kacdoon Baarlamaani ah uu ku kaco Xukuumadda Khayre oo ay si aqlabiyad leh ku wayso Kalsoonidda Xildhibaanadda.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Shaxda loo dajiyay ay ula muuqatay Fursad uu Dalka oo dhan ku hoos keeni karo Xukuumadiisa waxay isaga iyo Xildhibaano garab u ah u wadaan si Xowli ah, iyagoo waliba ku bixinaya Dhaqaale badan, Balse dhinaca kale Hogaamiyayaasha Dowlad Goboleedyadda oo aan isku dhinac wax u wadi jirin ayaa hadda u muuqda inay is xulufaysanayaan, isla markaana wada jir uga hortagayaan Duufaanta Muqdisho uga imaanaysa.
Raiisul Wasaare Khayre inkastoo la dhex galinayay Mawjado Siyaasadeed oo ay dhici karto inuu ku quuso ayaa haddana wali waxa uu haystaa Fursad uu isku badbaadin karo oo ah inuu badalo habka ay hadda wax u socdaan, una maro Siyaasad Dagan oo Nabadoonimo ah inuu xaliyo Xiisadda Siyaasadeed ee Dalka haraysay. Waxaana laga maarmaan ah inuu ka hor yimaado Shaxda loo dajiyay intii uu jiray Shirka Qaramadda Midoobay ee lagu ridayo Maamuladda Galmudug, Koonfur Galbeed, Puntland iyo Jubbaland, taasoo ah mid qar iska tuurnimo ah.
Khayre iyo Xukuumadiisa waxay awood u leeyihiin si wadahadal ah oo aan ku jirin Qalalaase Siyaasadeed inay ugu qanciyaan Dowlad Goboleedyadda inay uga dambeeyaan Dowladda Dhexe arrimaha ay ka midka tahay:
Iyo Awoodaha kale ee u gaarka ah Dowladda Dhexe ee aan lala wadaagin.
Dowlad Goboleedyadda Xubnaha ka ah Dowladda Dhexe ee Somalia ka sakoow arrinta Khaliijka waxay la lahaayeen Dowladda Dhexe Wadashaqayn aan horay u jiri jirin iyo Isu Soo dhawaaansho, Waxaana Fursadaasi ay dad badan filayeen inay ka faaiidaysan doonto Dowladda Muqdisho, balse waxay u muuqdaan in la dayacay.
Ugu Dambayn Shaxda loo dhigay Khayre waxay ka dhigan tahay “Baadida ninbaa kula daydayi, daalna kaa badan oo aan dooneyn inaad hesho daain ebid kaaye”